Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience' wuxuu taageeraa cilmi baaris casri ah oo loogu talagalay in sayniska loogu dhawaado maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daaweyn karo. Ujeeddadaas, Abaalmarinta McKnight Neurobiology ee Abaalmarinta Cilladaha Maskaxda (Abaalmarinta NBD) waxay ka caawisaa saynisyahannada ka shaqeeya inay ku dabaqaan aqoonta lagu gaadhay cilmi-baarista aasaasiga ah ee dhibaatooyinka maskaxda aadanaha.
Waxaan xiiseyneynaa soo jeedinno wax ka qabta bayoolajiga iyo farsamooyinka cudurada neerfaha iyo maskaxda. Tan waxaa ka mid ah soo jeedinno bixiya aragtiyo farsamo oo ku saabsan howlaha neerfaha ee synaptik, gacanta, molikal, hidde ahaan ama dhaqan ahaanba heerarka noocyada kala geddisan, oo ay ku jiraan bini-aadamka iyo laf-dhabarta iyo noolaha qaab-dhismeedka qalloocan. Waxaan si gaar ah u xiiseyneynaa soo jeedimaha ku jira dariiqyada aasaasiga ah ee cusub iyo kuwa bixiya waddooyin suurtagal ah oo wax looga qabanayo daaweynta. Wada-shaqeynta iyo codsiyada edbinta ah ayaa la dhiirigelinayaa.
Codsadayaasha loogu talagalay Abaalmarinta McKnight NBD waa inay noqdaan baarayaal madax-bannaan oo ka tirsan hay'adaha cilmi-baarista ee aan macaash doonka ahayn ee Mareykanka, waana inay hayaan boos macallinnimo oo ah darajada Kaaliyaha Professor ama ka sareeya. Kuwa haysta cinwaanada kale sida Professor Professor, Adjunct Professor, Professor Research Track, Booqashada Professor ama Macallin xaq uma laha. Haddii hay'adda martida loo yahay aysan isticmaalin cinwaanada aqoonsi, warqad ka socota sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda (tusaale, Dean ama Agaasimaha Cilmi-baarista) waa inay xaqiijisaa in codsaduhu leeyahay / keyd u gaar ah ilaha hay'adeed, sheybaarka, iyo / ama tas-hiilaadka. Waxaan xiiseyneynaa juqraafi, jinsi, iyo kala duwanaanta jinsiyadaha, waxaanan ku dhiirrigelineynaa haweenka iyo bulshooyinka midabka leh inay codsadaan. Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa waxqabadyo kala duwan oo cilmi baaris ah, laakiin ma ahan mushahar qaataha. Ilaha kale ee musharaxa ayaa la tixgelin doonaa marka la dooranayo abaalmarinta. Musharraxu ma qaban karo abaalmarin kale oo ka timaadda Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience kaas oo isku beddeli lahaa wakhtiga abaalmarinta Neurobiology of Brain Disorder award.
Waxaa jira hanaan xulasho laba-marxaladood ah, oo ka bilaabanaya warqad ujeeddo (LOI). Guddiga xulashada ayaa dib u eegi doona LOIs waxayna ku casuumi doonaan tiro codsadeyaal ah inay soo gudbiyaan soo jeedin buuxda. Ilaa afar abaalmarin ayaa la sameeyaa sanadkiiba, mid walbana wuxuu siiyaa $100,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah. LOIs waxay ku egtahay Maarso 15, 2021 (saqbadhkii aaga ugu dambeeya waqtiga dhulka). Soo jeedinta buuxda waxay noqon doontaa bisha Sebtember 20, 2021. Maalgelinta ayaa bilaabmaysa 1da Febraayo, 2022.
Habka dalbashada gebi ahaanba waa khadka tooska ah. Riix halkan si aad uhesho Foomka 'LOI Level LOI'. Hal baaraha (xiriiriyaha koowaad ee soojeedinta) ayaa looga baahan doonaa inuu dejiyo magaca adeegsadaha iyo erayga sirta ah (fadlan hayso magacaaga isticmaale iyo ereygaaga sirta ah sidaad ugu baahan doontid hawsha)); kadib buuxi waraaqda wejiga tooska ah oo ku shub sharax mashruuc laba bog ah oo aan ka badnayn laba bog oo tixraac ah; sawirro kasta waa inay ahaadaan xadka laba-bog ah. Fadlan hal-meel bannaan fogaan ah 12-qodob fogaannada iyadoo la adeegsanayo dhumucyo hal-inji ah. Nidaamkan A) bogsharaxaadda ujeeddooyinka iyo tixraacyada, iyo B) NIH Biosketches ee PI kasta waa in loo soo geliyaa hal PDF ah.
Gabagabeeyayaasha waxaa lagu casuumi doonaa emayl si ay u soo gudbiyaan soo jeedin buuxda. Tartanku waa mid aad u kacsan; codsadayaasha waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan in kabadan hal jeer. Haddii aadan helin e-mayl xaqiijin ah helitaanka LOI-gaaga toddobaad gudihiis oo gudbinta ah, fadlan la xiriir Eileen Maler emaler@mcknight.org.